पत्थरी भनेको के हो र किन हुन्छ ? मिर्गौला जोखिममा – ramechhapkhabar.com
पत्थरी रोग थुप्रै मानिसहरुमा हुने एक महत्वपूर्ण मिर्गौलाको रोग हो। यसले असहनीय पीडा, मूत्र संक्रमण र मिर्गौला समेत बिग्रन सक्छ। पिसाबमा क्याल्सियम अक्सोलेट या अन्य क्षारकण अर्थात् क्रिस्टल्स एक आपसमा मिल्दा केहि समयपछि विस्तारै मुत्रमार्गमा एक पदार्थ उत्पन्न हुन थाल्छ, जसलाई पत्थरीको नामले चिन्ने गरिन्छ।
मूत्रमार्गमा रहेका पत्थरी कण विभिन्न लम्बाई र फरक आकारका हुन्छन्। केहि पत्थर गोलाकार र बाहिरबाट चिल्लो हुन्छन्। यस प्रकारका पत्थरका कारण दुखाइ कम हुने र प्राकृतिक रूपमा पिसाबका साथ सजिलै बाहिर निस्कने गर्दछ । तर, केहि पत्थर निकै कडा र यसले निकै पिडा दिने गर्दछ। यस किसिमका पत्थर पिसाबबाट सजिलै निस्किँदैन। जसलई शल्यक्रियामार्फत निकाल्नु पर्ने हुन्छ ।
कहाँ कहाँ हुन्छ पत्थरी ?
पत्थरी मुख्यतया मिर्गौला, मुत्रबाहिनी र मूत्राशयमा हुने गर्दछ। अधिकांश व्यक्तिहरूको पिसाबमा रहेका रसायनिक पदार्थहरूले क्षार कणहरूलाई एक अर्कामा मिल्नबाट रोक्दछ, जसकारण पत्थरी बन्न सक्दैन। मूत्रमार्गमा भएको पत्थरीले पेटमा असहनीय पीडा हुने गर्दछ। तर, धेरै व्यक्तिहरूमा थुप्रै कारणहरूले गर्दा पत्थरी हुने सम्भावना रहन्छ।